पशुपतिमा भेटिए चार कलाकार ! | Screennepal
पशुपतिमा भेटिए चार कलाकार !
Jul 14, 2017screennepalfeature, Movie0
काठमाडौं, ३० असार । हाँस्यकलाकर शिवहरी पौडेल, सुरबिर पण्डित, किशोर भण्डारी र रेश्मा तिमिल्सिना पशुपतिमा भेटिए । उनीहरु एक आपसमा कुरा गरिरहेका थिए । खासमा उनीहरुको यो भेट एउटा छोटो चलचित्रले जुराईदिएको हो । चलचित्रको नाम हो ‘सञ्चारको संसार’ ।
नेपाल टेलिकमको जानकारीमुलक छोटो चलचित्र ‘सञ्चारको संसार’ सार्वजनिक भएको छ । शुभ मिडिया होमको निर्माण र नेपाल टेलिकमको प्रस्तुती रहेको चलचित्रमा नेपाल टेलिकमको सेवाहरुको बारेमा जानकारी दिईएको छ ।
स्थापनाकालदेखी हालसम्म नेपाल टेलिकमले सञ्चारको क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान र टेलिकले नेपाली जनतालाई दिएको सेवाको सम्बन्धमा छोटो चलचित्रमा स्पस्ट पारिएको चलचित्रका निर्देशक सरोज ओलीले जानकारी दिए । चलचित्रमा टेलिकमको बिकासक्रम र टेलिकमले जनतालाई पु-याएको फाईदाहरुलाई कलात्मक र रोमान्चक शैलीमा देखाईएको छ । चलचित्रमा चिठ्ठी पठाउने कालको दुःख देखी फोन, मोवाईल, ईन्टरनेट हुदैँ अहिलेको फोर जी सेवाले दिएको सुख र सुबिधाको बारेमा स्पस्ट पारिएको छ ।
राजु पौडेल र मरिचमान श्रेष्ठको कथामा बनेको चलचित्रलाई नेपाल टेलिकमले निर्माण गरेको हो । चलचित्रमा कमलमणी नेपाल, शिवहरी पौडेल, सुरबिर पण्डित, किशोर भण्डारी, शिवहरी आचार्य, नीरज नेपाल, रोशनी सापकोटा, रश्मी भट्ट लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । चलचित्रमा देखिएको सुन्दर दृश्यलाई सुदिप बरालले खिचेका हुन् ।
Previous Postश्रोतालाई ‘आश’ लिएर आए नवल Next Postभानुलाई सम्झँदै साँगीतिक सद्भाव